Taageerayaasha La Xiray Oo Eeda Dusha Ka Saaray Donald Trump |
Dhowr ka mid ah kuwii dacwadda lagu soo oogay ka dib weerarkii Congress-ka ayaa sheegay inay ayideen wicitaankii Donald Trump.
Aqalka Wakiilada ayaa todobaadkan go’aamiyay in Maxkamad la soo taago Madaxweynaha xilka haya Donald Trump. Waxaa lagu eedeeyay inuu huriyay weerarkii lagu qaaday Congress-ka 6-dii Janaayo.
Maalintaas iyo maalmaha soo socda labadaba, waxaa jira warbixino, badan oo laga yaabo inay daneynayaan Dimuqraadiyiinta hoggaamin doona dacwadda Maxkamadda Sare.
Muuqaal laga soo duubay xilligii duulaanka lagu qaaday Congress-ka ayaa muujinaya taageerayaal ku qeylinaya “Waa nala casumay” iyo “Waxaa na casuumay Madaxweynaha Mareykanka.”
Qareenka u doodaya Jacob Chansley, oo ah 33 jir, ka mid ah doodaha ugu hadal haynta badan, ayaa u sheegay CNN in macmiilkiisu “uu dareemay inuu ka jawaabayo baaqa madaxweynaha” markii uu xoog ku galay Koongaraska intii ay socdeen rabshadihii ay shanta qof naftooda ku waayeen. Chansley ayaa isla FBI-da u sheegtay.
Jenna Ryan oo Washington ku timid diyaarad qaas ah lana xiray kadib markii ay soo dhigtay muuqaal iyo sawir muujinaya cadeynteeda inay kaqeyb galeyso baraha bulshada, waxay aaminsantahay inay sameysay kaliya wixii Trump codsaday.
– Waxaan moodayay inaan raacayo madaxweynaheyga. Waxaan moodayay in aan sameeyay wixii naloo sheegay. Wuxuu naga codsaday inaan aadno halkaas. Wuxuu naga codsaday inaan halkaa joogno. Marka waxaan sameeyay wixii uu naga codsaday, Ryan ayaa sidaas u sheegtay wareysi ay siiyay telefishin maxalli ah.
Waxaa iyaguna jira taageerayaal badan oo FBI-da u sheegay in ay ka jawaabeen baaqii Trump, balse ayna ujeedkoodu ahayn in ay goobtaa u tageen in ay fal danbiyeed ka fuliyaan.
Tani waxay Trump ku sii adkaynaysaa maxkamadayntiisa iyo cadaymo loo mari karo xil ka qaadista ay golaha Sanetku ku samaynayaan.